ပြန်လည်အေးချမ်းလာပါစေ……”မှော်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြန်လည်အေးချမ်းလာပါစေ……”မှော်”
Posted by သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) on Jan 7, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 12 comments
လွတ်လပ်ရေးနေ့၏ နောက်တစ်ရက်တွင် တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သော မှော်တစ်ခွင်လုံးကိုကြည့်ရင်းသူ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေ၏။ ၂၄နာရီပတ်လုံးနည်းပါး အလုပ်လုပ်နေသော မှော်သည် ယခုတွင် စက်သံ၊ကားသံ၊ မိုင်းခွဲသံများ မကြားရတော့ပဲ တိတ်ဆိတ်ခြင်း မင်းမူနေခဲ့ပြီ။ အနီးအပါးရှိ လုပ်ကွက်များသည်လည်း ရုတ်တရက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည်များကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြသည်။ သူ လုပ်နေသော ကုမ္ပဏီသည်လည်း အများနည်းတူ လုပ်လက်စ လုပ်ငန်းခွင်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရလေတော့သည်။ ကုမ္ပဏီဝန်းအတွင်းသို့ မြေစာသယ်ကားများ တစ်စီးပြီး တစ်စီးမောင်းဝင်လာနေကြသည်ကိုကြည့်ရင်း သူ မပျော်ချေ။
ဖားကန့်သည် ကျောက်စိမ်းထွက်ရှိရာ ဒေသ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အားကိုးအားထားပြုရာ သယံဇာတ ရတနာသိုက်ကြီးတစ်ခု။ ယခုတော့ ထိုရတနာနယ်မြေတစ်ခုလုံး ရပ်တန့်နေရသည်။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်မလုပ်တော့။ တစ်ချို့က ကုမ္ပဏီသိမ်းနေပြီ။ သို့သော် နေရပ်သို့ပြန်၍လည်းမရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖားကန့် -မိုးကောင်းလမ်းသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော အခြေအနေများကြောင့် ပိတ်ထားလိုက်ရပြီ။ ဖားကန့်မြို့ မှော်ဝမ်း ကားဝန်းတွင် ကားများ သည်အတိုင်းထိုးရပ်ထားလိုက်ရသည်။ ဖားကန့်ရှိ ကုန်စည်ကူးသန်းမှုရပ်သွားသည်ဟု ပင်ပြော၍ရသည်။ ကုမ္ပဏီများက လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးထက် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်သာ အဓိကထား ၀ယ်ယူနေရသည်။ မနေ့ကအထိ ဆန်တစ်အိတ်တန်ဖိုးမှာ သုံးသောင်းကျော်သွားပြီဟု သိရသည်။ ဆန်၊ ဆီ၊ဆား၊ ကုန်ခြောက်တော်တော်များ ၀ယ်ချင်တိုင်းဝယ်၍မရတော့။
သူ စိတ်ပူနေသည်က နေရပ်သို့အလုပ်နား၍ ပြန်လွှတ်လျှင်ပင် ပြန်ရန်မဖြစ်သေးသည့် အနေအထားကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလျှင် ရာသီသိမ်းချိန်က နှစ်စဉ် မေလကုန်ပြီမှ။ ခုတော့ ရာသီက မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော အခြေအနေများကြောင့် ဇန်န၀ါရီလ အစမှာပင် သိမ်းရတော့မည့်အနေအထား။ ကချင်တပ်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည်ဟု ကြားရကတည်းက ဖားကန့်သို့မရောက်လာပါစေနှင့် ဟု သူဆုတောင်းသော်လည်း ပြည့်မလာ။ ခုတော့ လုံးခင်းအနီး (၇)မိုင်တွင် ဖြစ်နေသည်ဟု ကြားသိရသည်။ ဒီနေ့လည်း နန့်ယားရွာကို မနက် (၁၀)နာရီလောက်က ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းသည်ဟု သိရပြန်သည်။ သူကုမ္ပဏီကနေ မျှော်ကြည့်၍ မီးခိုးတလူလူတွေ့ရတိုင်း သို့လော သို့လောနှင့် ကြောက်နေရသည်။ ဒီအတိုင်း တစ်လလောက် အလုပ်မလည်ပတ်ပဲ နေရမည် ဆိုပါက သူတို့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ မုချ အိမ်ပြန်ကိန်းဆိုက်နေမည်မှာသေချာသည်။ လမ်းများကလည်း ပိတ်ထားသဖြင့် ပြန်ရန်ပင် ကျီးလန့်စာ စားရမည့် ပုံပင်။
သူတို့ကုမ္ပဏီရှိ ၀န်ထမ်းများကလည်း ဘယ်တော့ပြန်လွှတ်မလဲ ဟု တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်တွေ့တိုင်းမေးငေါ့မေးရသည်ပင် မနက်မိုးလင်းကနေ ညနေမိုးချုပ်သည့်အထိ။ ကုမ္ပဏီမှာ ရိက္ခာဖူလုံရဲ့လား။ ဘယ်တော့လောက်ပြန်လွှတ်မည်လဲ။ လမ်းစရိတ်မလောက်သူများက အပူတစ်မျိုး။ အကြွေးရှိသူများက အပူတစ်မျိုး။ သည်ကြားထဲ တစ်စခန်းထလာနိုင်သော ရေမဆေး အန္တရာယ်ကိုလည်း ကြောက်နေရသေးသည်။ သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ အပြင်မထွက်ရဟု ကုမ္ပဏီက ပြောကြားလာသည်။
မှော်တစ်ခုလုံး မီးခိုးတိတ် စက်သံငြိမ်နေသည်မှာ သည်နေ့နှင့်ဆိုလျှင် သုံးရက်ရှိနေပြီ။ ၀န်ထမ်းတိုင်းနားစွင့်နေသည်က အခြေအနေကောင်းလာပြီလား ဆိုသည့်အချက်။ တစ်နယ်တစ်ကျေးမှာ စီးပွားလာရှာသူချင်းပီပီ သူလည်း စာနာပါသည်။ သူပင်လျှင် အိမ်မပြန်ချင်သေး။ ယခုချိန် ပြန်ခိုင်းလျှင် လက်ထဲတွင် ရှူးတစ်ပြားမှ မကပ်သေးသဖြင့် လမ်းစရိတ်အတွက်ပင် အိမ်ကနေ လှမ်းတောင်းရမည့် ကိန်းဆိုက်နေသည်။ ထို့ကြောင့် သူ အိပ်မပျော် ၊ စားမ၀င်နှင့်…ဆုတောင်းနေရသည်။ ထို ဆုတောင်းက ပြန်လည်တည်ငြိမ် အေးချမ်းလာပါစေဟု…..ပင်။
ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းများ နှင့် ထပ်တူ ထပ်မျှဖြစ်လျှက်။
ပြန်လည်အေးချမ်းပါစေ ”” မှော် ”” ဆိုလို့
ငါဘာများ ပူပူလောင်လောင် ဖြစ်နေပါလိမ့်လို့
ဟိုမှော်လဲ အေးချမ်းပါစေဗျာ ….
ကောင်းတဲ့ရသ စာပေလေးပါ
မျှော်လင့်နေတုန်း ဖတ်လိုက်ရတယ် ။
ဒီနေ့ညနေ လုံးခင်းဘက်မှာ ဆန်တအိတ် ၄၈၀၀၀ ဟုသိရပါသည်။
ထပ်တူ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ မြေစာပင် ဖြစ်ရတာတော့ ပြည်သူတွေပါ။
အပြုသဘောနဲ့ ညှိနှိုင်းကြရင် အေးချမ်းမှုဆီ ဦးတည်မှာပါ။
တစ်စခန်း ထလာနိင်သော ရေမဆေး အန္တရယ် ဆိုတာ ရှင်းပြ ပေးနိင်မလားခင်ဗျ.. ရေမဆေးကျောက် ရှာတဲ့သူက အန္တရယ်ပေးတာလား….သိပ်မရှင်းလို့ပါနော်……
ဟုတ်ကဲ့ တစ်စခန်းထလာနိုင်သော အန္တရာယ်ဆိုတာက တစ်လောက (ရွာအမည်ကိုတော့ မဖော်ပြတော့ပါ) ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်းကို ရေမဆေးတွေဝင်ရောက်ပြီး မြေကော်စက် ၅စီးရဲ့ ကွန်ပျူတာဘုတ်တွေဖြုတ်သွားတယ်၊ နောက်ရာအိမ်မှူးရဲ့ ပါဂျဲရိုကားတစ်စီး ကိုမီးရှို့တယ်၊ မီးလာရောက်ငြိမ်းသတ်တဲ့ မီးတပ်ကားကို ခဲတွေနဲ့ လူဦးရေ ငါးရာနီးပါးလောက်က ၀ိုင်းပစ်တယ်၊ ကျောက်ဂိုဒေါင်အတွင်းက ကျောက်စိမ်း (၂၂)ခြမ်းခန့်ကို လုယက်ယူဆောင်သွားကြတယ်၊ ကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း (၆၀၀၀)ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ကြားသိရတယ်..။ ခုဆိုရင် ကုမ္ပဏီတော်တော်များများရဲ့ စွန့်ပစ်မြေစာပုံတွေမှာ အကျိုးတူကုမ္ပဏီဆိုရင် “မကျုးကျော်ရ၊ ရေမဆေးဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်းမပြုရလို့”ရေးထားကြရပါတယ်။ ဒါတောင် အရဲစွန့်ရှာဖွေမှုတွေလုပ်လာလို့ လုံခြုံရေးကင်းထားပြီး တားဆီးနေကြရပါတယ်။ ဒါတောင် ခဲနဲ့ပြန်ပေါက်တဲ့ ရေမဆေးတွေလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ ခုလို မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေချိန်မှာ သူတို့တွေလည်း တစ်စခန်းထပြီး အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ကြောင်း ရေးလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်…။
တရုတ်က..မြန်မာ့ ကျောက်စိမ်းတွေအတွက် ကောက်တဲ့အခွန်ကို.. ရာခိုင်နှုန်းတင်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာ ..ဟုတ်သလားခင်ဗျ..။
ကြားတာတော့ တော်တော်ကြာနေပါပြီ..။ ကွန်ဖန်းလုပ်ချင်လို့ပါ..။
( မြစ်ဆုံဆည် မတားမြစ်ခင်လေးထဲကလို့ သတိထားမိပါတယ်..)
ယူအက်စ်ကလည်း.. ဂျိတ်အက်ခ် ( http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2011/06/164819.htm )ရှိနေတော့.. ကမ္ဘာတန်းကျောက်စိမ်း..မြန်မာတွင်းထွက်တွေ.. ဈေးကွက်အရ.. ချိုးနှိမ်ခံရတဲ့..နှစ်အချိန်ပိုင်းပေါ့…။
ကျုပ်သဘောနဲ့ဆိုရင်.. အဲဒီနယ်တခုလုံးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကို.. ဒီဘီယားစ်( http://en.wikipedia.org/wiki/De_Beers )လို.. မဟာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ အကြံပေးတိုက်ရိုက်ယူပြီးမှ.. ဆက်လုပ်စေချင်တာပါပဲ..။
လောလောဆယ်.. ဂယောက်ဂယက်အချိန်နှစ်တွေမှာ ရပ်ထားလိုက်စေချင်တာပါ..။
တလောက ဓါတ်ပုံတပုံတွေ့လိုက်သေးတယ်.။ ပြန်ရှာတာ မရတော့ဘူး.။
မြေချိုင့်ကြီးတွေဘေးမှာ…ရွာကလေးတရွာထဲ.. ကုန်းမြင့်ပေါ်ရောက်နေပြီး.. အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရွာအဖြစ်သတ်မှတ်မြားပြထားပုံလေး..
ရာသီဥတုသာယာတဲ့တနေ့မှာ.. မွန်းစတားထရပ်ကားတွေသုံးပြီး..တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့.. မြန်မာကျောက်မျက်ရတနာတွေ အနှိမ်မခံရပဲ.. တကမ္ဘာလုံးတန်ဖိုးကြီးထား သုံးကြတဲ့နေ့ရောက်အောင် လုပ်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်.။
သူကြီးရေ . ဂျာနယ်လား သတင်းစာ မှာလားတော့ မမှတ်မိဘူး ။ တရုတ်က အကောက်ခွန် ရာခိုင်နုန်းတင်လိုက်တဲ့ အတွက် ဒီတခေါက် လာတဲ့သူ နည်းသွားပါတယ် ဆိုပြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်။
အမလေးဗျာ လန့် တော့လန့် သွားမိပါတယ် ကိုသော်ဇင်ရေ။ရေမဆေးအန္တရာယ်ဆိုတာတော့ ရှင်းပြပေးပါနော်။
အထက်မှာ တညင်သားကို Replyပြန်ထားတာကိုပဲ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ…။ ကျေးဇူးတင်လျှက်….။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုသော်ဇင်ရေ ။ခုမှဘဲရှင်းသွားတော့ တယ်။အေးချမ်းပါစေဗျာ။